Sebastian K., Qoraa SmartMe
Posts by Sebastian K.
Dom » Maqaallada Waxaa daabacay Sebastian K.
Honor 50 Pro wuxuu bixin doonaa lacag bateriko aad u dhaqso badan
sharaf 50 pro, huawei, casriga ah, dhakhso u buuxin
Horudhaca casriga 'Honor P50 Pro' waa mid aad u dhow. Waxaa jira tilmaamo badan oo muujinaya in taleefanka casriga ahi na siinayo si dhakhso ah oo bateriga lagu buuxiyo. Marka laga hadlayo qaabka 50 Pro, waa in lagu qabtaa awood 100 ...
Motorola waxay damacsan tahay inay sii deyso taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee wireless-ka lagu xiro
xukun wireless, motorola, casriga ah
Motorola illaa iyo hadda waa tan ugu firfircoon suuqa casriga ee qeybta miisaaniyadda iyo aaladaha dhexdhexaadka ah. Ha iloobin, si kastaba ha noqotee, in aaladaha shirkadan waagii hore ay awoodeen inay layaabaan oo ku farxaan. Waxay la mid noqon kartaa hadda -...
Xirmada ugu horeysa ee loo keenay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'addressee'!
Markay ahayd 11-kii Maajo, 2021, daqiiqad xusuus mudan ayaa dhacday markii ay timaaddaba gaadiid ay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaanno drones-ka ee dalka Poland. Macaamiilkii ugu horreeyay maalintaas wuxuu amarkiisa si toos ah uga helay mid ka mid ah dukaamada isboortiga ee Lublin. Hawlgal sida aan ka akhrinay Facebook ...
Huawei P50 wuxuu soo bandhigayaa bandhigyo. Eeg waxa calanka cusub u eg!
Huawei wuxuu si tartiib tartiib ah u diyaarinaya calankiisa cusub ee qaabka P50 Pro. Waxaan horeyba kuugu haynaa shaashadda shabakadda oo si fiican u tusaysa kamaradda. Eeg sida ay u egtahay iyo waxa casriga ah ee ugu dambeeyay ee ka imanaya xasilloonida Huawei ay bixiso. Ballanqaadyada in ...
App-ka IRobot Home oo leh astaamo cusub oo xiiso leh!
guriga irobot, qolka irebot
Wakiillada shirkadda iRobot waxay ku wargeliyeen in arjiga iRobot Home uu hadda helay xalal aad u faa'iido badan, taas oo ay ugu wacan tahay qorshaynta iyo koorsada nadiifintu ay ula jaan qaadi karto baahiyaha isticmaalaha. Wakiilada IRobot ma aha kuwa bilaa camal ah! Nooca ugu dambeeyay ee arjiga oo qalabaysan ...